Miyaan ku kalsoonaadaa calaamadaha binary ee bilaashka ah? | vfxAlert official blog
Calaamadaha bilaashka ah ee vfxAlert: dhaqso iyo faa&#39;iido
Marka laga bilaabo si ay fursadaha ganacsiga, bilowga ah iyo ganacsatada xitaa xirfadeed Forex su'aal qabto. Miyaan ku kalsoonahay calaamadaha binary ee bilaashka ah ama maya? Waxaa jira dalabyo badan oo internetka ah, sida loo doorto midka saxda ah. Miyaan iibsan karaa rukhsad isla markaaba? Aan aragno sida tani ugu shaqeyso vfxAlert.
Si aad u hesho calaamadaha bilaashka ah, kaliya ku rakib barnaamijka vfxAlert ee nidaamkaaga qalliinka oo iska qor goobta:
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan qaabka signal ee qaybta « Sidee u shaqeeyo vfxAlert » iyo ugu xadeynta muhiim ah oo lacag la'aan ah calaamadaha fursadaha binary:
• Qiyaasta "Awood" ayaa lagu muujiyaa hal calaamadood oo afartiiba ah;
• Wax war ah kama helin «Heatmaps».
Aynu aragno haddii faa'iido lagu ganacsan karo xannibaadahaas oo kale iyo in kale? Si tan loo sameeyo, aan soo qaadanno istiraatiijiyad ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah loo heli karo xitaa kuwa bilowga ah.
Kasta oo ku kala duwan M1-D1. Muddada oo dheereysa, ayaa calaamadda lagu kalsoonaan karaa.
Labada ciyaaryahan kasta oo lacagta. Shuruudda ugu weyn waa go'an (2-3 dhibic) faafitaan iyo lacag la'aan qarsoon. Natiijooyinka ugu xasilloon waxay muujinayaan EUR / USD, GBP / USD, NZD / USD, AUD / USD.
Istaraatiijiyaddu waxay isticmaashaa hal tilmaame farsamo:
• CALL-doorasho. Dhammaan saddexda istiraatiijiyadood waa in loo hagaajiyaa xagga sare oo si isku xigxig ah loo dejiyaa hoos ilaa kor: "dheer - dhexdhexaad - gaaban", ama SMA (8) MASMA (5) -SMA (3). Tani waa waajib in la xaqiijiyo kor u kac.
• saaray-doorasho. Xaaladaha iska soo horjeedda: celceliska dhaqaaqu wuxuu u rogayaa kor ilaa hoos iyadoo loo eegayo qorshaha “dhakhso - dhexdhexaad - gaabis ah” (SMA (3) –SMA (5) –SMA (8)) - waxaan suuqa ku galnaa baarka labaad kadib burburka.
Shuruudaha furitaanka ikhtiyaariga ah ee Moving Average ayaa fudud; dhibaatadu waxay ku jirtaa kaliya xaqiijinta calaamadaha binary ee bilaashka ah:
• Astaamaha saxda ah ee ishaaradu ma muuqdaan; ma jirto wado lagu xaqiijin karo istiraatiijiyadda.
• Maqnaanshaha "Heatmaps" ma kuu oggolaanayso inaad ogaato kalsoonida astaamaha marka loo eego tirakoobka, tilmaamayaasha kale ee qiimeynta degdegga ah ee isku halaynta calaamadaha binary.
Sida aad ku arki karto fiidiyowga, waad sameyn kartaa lacag, inkasta oo ay u egtahay bakhtiyaanasiib. Inkasta oo xisaabinta loo fulinayo si waafaqsan istiraatiijiyad isku mid ah noocyada lacag bixinta, taas oo aan lagu sameynin kuwa badan xitaa kuwa bixiya calaamadaha ugu fiican. Kaliya macluumaadka oo dhan lama heli karo, ganacsaduhu waa inuu go'aan ka gaaraa kaliya tilmaamayaasha iyo garashada.
Qof kastaa wuxuu go'aansadaa inuu u beddelo nooca calaamadaha ee lacagta la siiyay iyo in kale. Laakiin, haddii aad si dhab ah uga fikirayso sida lacag looga sameeyo ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaar ah wuxuu tixgelinayaa faa'iidooyinka rukunka la bixiyo:
• Ganacsaduhu wuxuu arkayaa dhammaan macluumaadka calaamadaha. Isku-darka "calaamadaha + istaraatiijiyada ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah" u oggolaan doonta waqti si loo arko xilliga ay "dhabta ah" suuqa bilaabmayo inuu is beddelo.
• algorithm la-qabsi iyo calaamado loogu talagalay cryptocurrencies ayaa lagu daray, kuwaas oo sidoo kale la heli karo dhamaadka usbuuca markay Forex xiran tahay;
• Ku darista dallaalkaaga. Ku baayacmushtara deebaajigaaga iyo xeeladahaaga adigoon ka bixin vfxAlert.
• U dirista calaamadaha telegram kanaal ka ganacsiga qalabka mobilada.
• Shaandheeyeyaasha signalka iyo tirakoobka la dheereeyey waxay suurtogal ka dhigayaan in la go'aamiyo hantida ugu faa'iidada badan suuqa.
Habka ganacsiga vfxAlert waa mid fudud: haddii macaamiisha kaliya ay helaan khasaara iyagoo isticmaalaya calaamadaha ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah ee dhabta ah, adeeggu ma heli doono lacagta soo socota ee rukunka. Kuma tiirsanaanno dillaal gaar ah laakiin waxaan ku talinaynaa oo keliya iyaga.